Atụmatụ maka mmalite nke akwụkwọ - ịga akwụkwọ, akwụkwọ mmega na ihe ndị ọzọ
Gbalịa ịga ụlọ akwụkwọ ọnụ
Nweta ihe nkenyere ụlọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị
Ememe ezumike na-abịa ná njedebe, ọtụtụ ụmụaka na-enwekwa oge ndụ ọhụrụ na-atọ ụtọ: ha na-abịa n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na nke a na-emetụta nwa gị, ị ga-ahụ na ọ na-enwe obi ụtọ ịlaghachi na ụlọ akwụkwọ ma na-eburu nchegbu. E kwuwerị, ọ maghị kpọmkwem ihe ị ga-atụ anya ya.
Atụmatụ maka mmalite nke ụlọ akwụkwọ
Iji malite ọrụ ụlọ akwụkwọ gị, ị ga-ewepụ egwu gị ma dozie nwa gị maka nnukwu ụbọchị. Otu esi eme nke a, ị nwere ike ịgụ ebe a.
Tinye ụlọ akwụkwọ ahụ na ìhè dị mma
Cheta oge nke gi na ulo akwukwo. N'ezie, enwere onye nkuzi nke i maghi. Ma ọ bụ isiokwu ị kpọrọ asị. Mana ị gaghị enwe ike ịchefe ihe ncheta ọjọọ ndị a na nwa gị.
Wepụ ihe ndị na-echegbu ya. Chee echiche banyere ụlọ akwụkwọ ahụ dịka ihe kwesịrị ịbụ: ebe ị na-amụta ihe ndị dị ụtọ kwa ụbọchị na izute ọtụtụ ndị enyi ọhụrụ. Karịsịa ná mmalite nke ụlọ akwụkwọ nke a dị mkpa karịsịa.
Mgbe nwatakịrị rute ọrụ ọhụrụ ahụ site na mmetụta dị mma, ịmụ ihe dị mfe karị. Site na nkwụghachi omume ndị nwere ike ma ọ bụ na ọ bụghị na ahụmahụ mara mma ị kacha mma ịgwọ, ọ bụrụ na ha mere n'ezie.
Esola ndi ozo bia
Ọ bụghị naanị na ụlọ akwụkwọ ahụ n'onwe ya, kamakwa ụzọ dị ọhụrụ na nke dị ize ndụ maka nwa gị. Mee ya n'otu ụbọchị tupu ị debanye aha. Ọ dị mkpa na ị na-agwa nwata gị ihe ize ndụ ma gosi ya àgwà kwesịrị ekwesị.
N'otu oge ahụ, ị ​​ghaghị ime ka o kwenye na i nwere ike ịtụkwasị ya obi nakwa na ọ ga-aga ya naanị ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-aga ụlọ akwụkwọ site na bọs, ị ga-enye ya ụfọdụ iwu.
Gwa nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị maka nyocha ya. Ụmụaka nwere ọhụụ nke ha ọ bụghị nanị n'ihi na ha dị ọtụtụ n'ọtụtụ ọnọdụ. Ị ga-ewere nke a na akaụntụ ọ bụla ikpe.
Ihe kachasị mkpa bụ akpa akpa. O kwesiri igosi uwe na, karia ihe nile, dika ihe omuma dika o kwere mee. Ka o sina dị, ọ ghaghị inye ohere zuru ezu. Karịsịa n'ụbọchị agụmakwụkwọ, nwa gị chọrọ ọtụtụ akwụkwọ na akwụkwọ ndekọ.
Na-ekwu maka okwu: Ị ga-enwetakwa ụfọdụ n'ime ha. Nye nwatakịrị ohere ịhọrọ ya n'efu, mana jide n'aka na ị ga-enweta ụfọdụ n'ime akwụkwọ eji emegharị. Okwu banyere nchebe gburugburu ebe obibi na-aghọwanye ihe dị mkpa, ya mere i nwere ike igosi ụmụ gị na obere onyinye ọ bụla dị na nke a dị oké mkpa.
I kwesịkwara ịṅa ntị na mmekọrịta gburugburu ebe obibi na stains. Ọ bụ ezie na nke a pụtara ọnụọgụ dị elu karị, mana echebe nwa gị. Ndị plasticizers, nke dị na agba ọnụ, bụ ihe ọ bụla ma dị mma.
Ntuzi ndu ndi na-eri nri
Nri - echefu oke na obere ntụziaka
Atụmatụ Mkpụrụ osisi - Herbs
Ogige Atụmatụ - Wepu clover
Ogige Atụmatụ - Dị ka o kwesịrị ifatilaiza
Nchịkọta Cocktails maka Summer | ọṅụṅụ
Mee maka ụmụaka - chọta ụzọ gị